Ny tovovavy amin'ny Indiana emeralda - tovovavy Indiana
Ny tovovavy amin’ny Indiana emeralda — tovovavy Indiana
Posted on 08.03.2019, 23:33 By Goodsite
Fotoana fohy mialoha ny Krismasy, ny mpampianatra Annie Kruger mandray antso an-tariby avy any India. Ny ray, izay heverina ho amin’ny fialan-tsasatra ao Espaina, dia nanjavona avy ao amin’ny Hotely iray ao Jaipur. Fohy-tanana anao boky fiaramanidina ho any India ary dia teny an-dalana. Teny an-dalana izy, dia mianatra ny Solaitrabe ny fiaramanidina ny manan-karena Indiana Arun. Rehefa tonga Tao India, Annie dia ny fomba ny trano fandraisam-bahiny, izay ny ray efa zatra nangalatra azy ny kitapom-bola, ary ianao hahafantatra ny Indiana Karan. Karan dia ny pariah, izay mitantana Annie ny fananany avy amin’ny mpangalatra ny hahazo indray ary ao ny andro vitsivitsy ny posiposy amin’ny alalan’ny Jaipur. Lalina dia hampivelatra ny fifamatorana eo amin’ny roa. Toy Annie ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny ny ray ny lisitry ny anaran’ny manam-pahefana Indiana, izy dia miezaka mba hahitana hoe inona no ao ambadika, fa tsy misy olona te-hiresaka aminy, mba Marita Singh, saro-pantarina Maharani. Ireo tsara Annie ny ray, ny dokotera, Wilhelm Kruger, mbola avy ny teo aloha ny asa. Tao an-Dapa, Annie misedra ny fomba mahagaga indray Arun, ny zanak Marita. Mba hanampiana Annie amin’ny fitadiavana ny rainy Arun manasa anareo ho amin ny fiantrana ny zava-nitranga ny ampitso hariva. Fa aiza koa i Annie miaraka amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Indiana manan-karena ho tonga ao ny resaka. Satria Arun jaza dia saro-piaro ny Karan, izy no mahatonga ny mpanompony mba hahazoana antoka fa Karans-trano rava any amin’ny fokontany mahantra, ary izy no nosamborina. Ny fiantrana Gala Annie mba hahitana, fa ny lehibe emeralda avy ny angano, izay anao ny am-pianarana mialoha ny lasa India maintsy mbola nisy nilaza, ary ao ny fizakana Maharani no misy. Ny namana ao amin’ny Maharani, Annie fantany fa ny ray nanana fifandraisana tamin ny Indiana mpampivelona Mena. Izany dia lalana mitondra ho any amin’ny Banga, tahaka ny Mena maintsy handao taorian’ny Annie ny ray, ny firenena efa nametraka ny Fototra taona vitsivitsy lasa izay, dia maty. Afaka manampy ny Menas rahalahy, Miiba. Dia efa very aorian’ny lozam-piarakodia na ny tongony ary ankehitriny heverina ho ny mponina ao amin’ny fokontany mahantra ho toy ny ody. Fa mialoha ny resaka amin’ny Mini Annie mandray avy Marathi, ny vaovao nilaza fa ny polisy dia azo antoka fa ny rainy dia maty. Aorian’ny lozam-piarakodia, dia nodorana tamin’ny Fiarakaretsaka, ary afa-tsy ny peratra mariazy sisa. Tena tohina, Annie mahita ny fiadanam-po ao Arun ary nanolotra azy ny fandevenana ny lanonana teo amoron ny Ganges. Annie dia raikitra ny handao ny orinasa, fa Arun mba handray anjara ao ny handresy lahatra azy ho amin’ny sakafo Hariva niaraka tamin’ny reniny sy ny vahiny hafa. Tonga amin’ilay fiteny fa ny Mpampivelona Menas i Marta tamin ny fotoana ny fampakaram-bady blackmailed. Ny andro manaraka, Arun Annie miaraka amin’ny seranam-piaramanidina, saingy alohan’ny izy dia mitondra anao any amin’ny toerana masina, ary mahatonga ny volavolan-dalàna momba ny fanambadiana. Ho mariky ny fitiavana, izy no manome azy ny emeralda. Amin’izao Fotoana izao, tampoka hita miiba, ary Annie manoro hevitra ny handeha ho any am-piangonana, dia izy no nentina niala ny polisy. Tanteraka sahiran-tsaina Annie mandà ny fangataham-bady. Na izany aza, ny Filankevitry ny magicien mamela anao no sisa sy ny sisa tsy hitady ny vaovao rehetra dia afaka mahazo sy manapa-kevitra ny tsy hampiasa ny miverina sidina. Tonga tao ny Fanjanahan-tany am-pasana ny trano Fiangonana, Annie tampoka mahita ny ny fasana ny vato. Izany dia ny mamaky izay Annie Krüger maty teo amin’ny faha-telo volana. Noho izany, ny fanontaniana ho an Annie: Iza no tena izy ary izay misy azy avy. Hianatra bebe kokoa ianao, niezaka ny hanao izany miaraka amin’ny fanampian’ny Arun miiba tao an-tranomaizina, fa izany no voalaza fa namoy ny ainy tao anatin’ny ezaka afa-mandositra. Any Am-Ponja mihaona, na izany aza, eo amin’ny Karan, izay mbola tazonina eto, ary Annie fantany fa Arun dia ho famongorana ny Karans an-trano dia tompon’andraikitra. Satria izy ireo ahiahiana fa ny fiaviana dia mifandray amin’ny Asa ny mpampivelona Menas miaraka, dia mikendry ny hanampy ny Dr. Hager, ny amin’izao fotoana izao ny Tale Menas Fototra. Manazava ny anjara asan’ny vehivavy ao India sy ny fanabeazana ny zazavavy ho an’ny fianakaviana, dia matetika ny kely loza, ary ny ankizilahy ihany no ho tompony mpihazona dia tonga soa. Ny Maharani dia Annie, ary manome azy vola mba handao ny firenena avy hatrany. Izy dia miaiky fa izy dia nosoloina Menas ny fanampiana avy ny zazalahy. Amin’ny horohoro, Annie tsy maintsy manaiky fa ny voalohan-teraka ny tena mpandova ny Maharajas sy handao ny Lapam-panjakana. Satria, mandritra izany fotoana izany, Arun hita, dia tsy maintsy manazava ny»reny»mba aminy fa tsy ny zanany lahy. Koa, izy ravina tsy misy teny iray, ny fananana.
Izy no manome ny»vavy», ary mila toerana miafina, satria izy no tandindonin-doza, satria izy efa blackmailed diso ny hametraka ny ray aman-dreny. Annie dia tapa-kevitra ny hitondra ny fanafintohinana ho an’ny Vahoaka. Amin’ny Aruns fanampiana, mba hiala tsiny azy noho ny fitondran-tena sy ny fampanantenana ny Karans-trano indray, dia mahita ny miafina ny antontan-taratasy, izay milaza fa misy koa ireo zanany valo no nifamely. Rehefa avy amin’i Annie koa dia mazava fa izy ireo dia handrava ny Fikarohana, ny Indiana ambaratongam-pahefana. Arun, na izany aza, ho resy ny tany eo ambanin ny tongony izy, toy ny tsy maintsy tonga saina fa izy dia avy amin’ny ratsy tanàna mahantra ny Jaipur. Izy no lazaina fa teraka avy any amin’ny avo indrindra saranga, dia Latsaky ny Karan. Toy ny tsy maintsy tonga saina izy, izy dia tsy afaka ny henatry ny mpisera isan-karazany, mifidy ny famonoan-tena. Ny Maharani, na izany aza, dia dissipated, ho toy ny vokatry ny fijoroana ho vavolombelona ny amin’i Annie sy ny»ray», dia ny manampahefana no nampahafantarina. Toy ny mpandova ny fianakaviana ny Singh izay afaka Annie Menas Fototry ny fanohanana ara-bola sy ny ela-tiana ny faniriana, fa ny noroahina, ary ny kamboty zazavavy avy Jaipur, ny tanàna ny»Girls», ny zava-misy. Ny Horonan-tsary dia voatifitra in Jaipur sy Amber, India. Any Alemaina izy niseho toy ny roa-parter, isaky ny roa minitra ny lalao amin’ny NSA. Ny ampahany voalohany dia ny tonga tapitrisa ireo mpijery sy ny tsena anjara ny, ny tapany faharoa, tapitrisa ireo mpijery sy ny tsena.
Eny DVD ny Horonan-tsary teo
Navoaka tao amin’ny volana desambra. Ny Horonan-tsary nahazo ny maro tsara reviews. Ny Rheinische Lahatsoratra nidera ao amin’ny lahatsoratra»Ny tovovavy amin’ny Indiana emeralda»- mpampianatra ao India fairytale Fanjakana izay famirapiratan’ny amin’ny mahatalanjona, ny cinema-ny tahaka ny sary amin’ny maha-lalina kokoa ny loko, tsara tarehy ny tempoly, ny fangalàna lapa sy ny oram-panala rakotra Himalaya, fa eo ihany koa ny ny herisetra ny fahantrana, fanararaotana sy ausgrenzendem rafi-tsokajin’olona vaovao efa nahavita, ny bewildering, ara-panahy voampanga firenena, mba hitondra ny kely kokoa. Ny FAZ nilaza fa ny»angano India tearjerker»nanana na inona na inona ny ifandraisany amin’ny fadiranovana ny zava-misy, na izany aza, ny tarehiny, ary tsara mpilalao lahatra
← Maimaim-poana ny Indiana any amin'ny karajia - Resaka miaraka amin'ny Indiana ny Olona an-Tserasera
Nofy ny olona dia mahita Ny toerana tsara indrindra mba hahita ny marina ny olona mba hahafantatra - YouTube-ny →
© 2019 Ny Lahatsary Amin'ny Chat India